CALI GUREY OO SI KOOBAN TAFSIIR UGA BIXIYEY MAWQIFKA UU KA AAMINSAN YAHAY HADALKII CALI KHALIIF | Burco Media
CALI GUREY OO SI KOOBAN TAFSIIR UGA BIXIYEY MAWQIFKA UU KA AAMINSAN YAHAY HADALKII CALI KHALIIF
Isaaqna dawlad wada ilmaadeer ah ayuu raali ku yahay ee labadaa sida la isu waafajinayo uun ha laga tashado. Hadiise marka runta loo sheego Cali Khaliif si gaar ah ayaan u hambalyaynayaa waayo Isaaq cid runta u sheegta oo aan u habranin waa loo baahnaa.
Hadalkiisana laaxin laga jari maayo waayo haduu yidhi talo idinka keligiin idinka go’aan oo iska wadataan kuma heshiin karno ee hadii wax aynu wada leenahay ka wada tashanayno taladeedana in aynu ka wada hadlona ogoshihiin anagana noogu dhan meel aan ka diido iyo wax aan ku diido midna ma garanayo. Midda kale waar ninka ragga ah ee hadalkiisu cad yahay waxaa ku heshiin kartaan iyo waxa ku kala tegi kartaan labadaba waad garan kartaa.
Laakiin hadii milil korkii uun la dhayo oo faq iyo dhuxdhux iyo afgobaadsi la isku maaweeliyo “maaweelo ma bogsiiso meel ku bugtoo ma bi’iso madadaalo murugada”.
Markaa anigu hadalka Cali Khaliif baytul qasiidkiisa waxan u fahmay ” waar Somaliland mid ah oo taladeeda loo siman yahay iyo dawladnimo la wada leeyahay een la kala lahayn hadii diyaar loo yahay waanu ogolahay ee aan ka wada hadalo” Isaaqna dawlad wada ilmaadeer ah ayuu raali ku yahay ee labadaa sida la isu waafajinayo uun ha laga tashado. Hadiise marka runta loo sheego ay xabaalaha soo faqaya yaan oo waa lana xasuuqay caadifaydda
dadka lagu kicinayo dee la isugu iman maayo. Intii dhimatay AHN eh waxa hiil u ah dal iyo dawladnimo ka door roon tii xasuuqday sinaan iyo cadaalad ku dhisan si wixii shalay dhacay aanu mar kale u dhicin.